Ciidamada Puntland oo qabtay gaari xamuul oo siday qalabka laga sameeyo qaraxyada – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Puntland oo qabtay gaari xamuul oo siday qalabka laga sameeyo qaraxyada
Ciidamada Amniga Puntland ayaa duleedka waqooyi ee gobolka Mudug ku qabtay gaari xamuul ahaa oo laga dhex helay qalab laga farsameeyo qaraxyada, kaasoo la doonayay in la geliyo gudaha deegaanada Puntland.
Gaarigan ayaa la sheegay inuu marayay wado raf ah, isla markaana ka wareegay wadada laamiga, waxaana ciidamada Puntland ay gacanta ku dhigeen afar qof oo gaariga saarnaa.
Sarkaal ka tirsan Laamaha amniga Puntland ayaa sheegay in gaariga iyo qalabkii qaraxyada ahaa la geeyay xabsiga dhexe ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo.
Laamaha ammaanka Puntland ayaa sheegaya in kooxaha qaraxyada diyaaraya ay doonayeen in shacabka ku dhibaateeyaan.
Qalabkan ayaa isugu jiray biro, iyo alaabo kale oo laga sameeyo qaraxyada, waxaa lagu wadaa in maanta loo soo bandhigo saxaafada
Madaxweyne Farmaajo oo kulankii u horeeyay la qaatay Danjirayaasha Jaamacadda Carabta